Service ကို - ။ Viproce စက်မှု, LTD
သံမဏိ Ball ကို
အခွားသောပစ္စည်း Ball ကို
အစွမ်းကုန် bearing ရွေးချယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု
Rolling ဝက်ဝံအမျိုးအစားများ, ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်လာ။ တစ်ဦးကိုလှိမ့ bearing အစီအစဉ်ဒီဇိုင်းကသင့်လျော်သောဖြစ်စေသောစပါးအမျိုးအစားရွေးဖို့ရန်နှင့်တစ်ဦးသင့်လျော်သော bearing အရွယ်အစားကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်တစ်ဦး bearing အစီအစဉ်ကိုလှိမ့ဝက်ဝံ၏ရှိရေးဒါပေမဲ့ထိုကဲ့သို့သောရိုးတံနှင့်အိုးအိမ်အဖြစ်ဝက်ဝံနှင့်ဆက်စပ်အစိတ်အပိုင်းများလည်းပါဝင်သည်ပါဘူးမသာ။ က wear တားဆီးနှင့်ဝံသည်၎င်း၏အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်အောင်ချေးဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှိပါတယ်ကြောင့်ချောဆီကိုလည်းဝံအစီအစဉ်၏အလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမှတပါး, တံဆိပ်ခတ်ကိုလည်းချောဆီများသန့်ရှင်းမှုဖို့အရေးကြီးတယ်အရေးပါမှုသည်စွမ်းဆောင်ရည်အရာတစ်ဦးကအလွန်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, အခြားရှုထောင့်စတာတွေ, ထိုကဲ့သို့သောသင့်လျော်သောကိုက်ညီတဲ့အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခံရဖို့ရှိသည်နှင့်ပြည်တွင်းရှင်းလင်းရေးသို့မဟုတ်ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားဆောင်သော, devices များနှင့် installation နဲ့ဖယ်ရှားရေးနည်းလမ်းများကိုင်ပြီး
အောင်မြင်စွာဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးရန်ဖောက်သည်အထူးလိုအပ်နှင့်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. လိုအပ်ရာ၏နက်ရှိုင်းတဲ့နားလည်မှုတောင်းဆိုနေပြီ။ ထိုကဲ့သို့သောမော်တော်ယာဉ်များ, အိမ်သူအိမ်သားကရိယာ, ပန့်များနှင့်လျှပ်စစ်မော်တာအဖြစ်ထုတ်ကုန်များ၏ကြီးမားသောစီးရီးထုတ်လုပ်သူကိုဖောက်သည်နည်းပညာ, အရည်အသွေး, ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်. အလွန်တိကျတဲ့နှင့် exacting လိုအပ်ချက်များကိုရှိသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်, အလုံးစုံကုန်ကျစရိတ်များလျှော့ချရန်သင့်အား enable ပြုလုပ်စံနှင့်စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်ပေးပါတယ်။
ဖောက်သည်များနှင့်အတူနီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကို - ထိထိရောကျရောတဲ့ဒီဇိုင်းမိတ်ဖက်ဖြစ်လာ - Viproce ၏အောင်မြင်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများတစ်ခုချင်းစီကိုလျှောက်လွှာထူးခြားသောကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ဒီဇိုင်းများတစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင်အနားပေးသောဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-အကျိုးရှိစွာဖြေရှင်းနည်းများ, ထောက်ပံ့၏ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိသည်။
Viporce မှန်မှန်ဝေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စံထုတ်ကုန်လိုင်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်အထူးဝက်ဝံဒီဇိုင်း။ သေးငယ်ခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်ပိုကြီးသော, အထူး attribute တွေနှင့်အတူ, ဒါမှမဟုတ်အထူးပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းကျနော်တို့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။
ကျနော်တို့အဘို့ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအစွန်းရောက်ဖြေရှင်းချက်အချို့သည် 8 "ရိုးချင်း, 25000 ပေါင်မှစွမ်းရည်မှ 1mm ပါဝင်သည်။ [11.340 ကီလိုဂရမ်] -320 ° F ကိုကနေ 600 ° F ကိုမှအပူချိန် [-195 ° 315 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ] ဓာတုထိတွေ့မှုနှင့်ခရမ်းလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပိုများသောလေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာများ, အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းပစ္စည်းအသုံးချသို့မဟုတ် application သို့မဟုတ်ပရိသဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်တောင်းဆိုတဲ့အထူးလိုအပ်ချက်ထားရှိရန်။
ဇာစ်မြစ် registratio ၏လက်မှတ် ဎ
ဇာစ်မြစ်၏အထွေထွေလက်မှတ်, မှတ်ပုံတင်နှင့်ထုတ်ပေးရေး (ကို C / O), GSP စနစ်, ဇာစ်မြစ်၏လက်မှတ်, မှတ်ပုံတင်နှင့်ထုတ်ပေးရေး (forma, Form)
ဘာသာပြန်ချက်, မေးလ်ပြန်ကြားချက်, စီးပွားရေးညှိနှိုင်းမှု
Books, ကက်ဘိနက်ကားဆွဲ, အကောက်ခွန်ကြေငြာစာတမ်းများကိုအောင်, အကောက်ခွန်ကြေငြာများနှင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးစာရွက်စာတမ်းများ
အွန်လိုင်းစံချိန်, စာရွက်စာတမ်းများ, စိစစ်အတည်ပြု
စာရွက်စာတမ်းပြန်လည်သုံးသပ်, သတင်းအချက်အလက် entry ကို, အခွန်ပြန်အမ်းငွေကြေငြာ
E-လိပ်စာ Viproce စက်မှု CO ။ , LTD မှ
E-mail ကို: 644973840@qq.com